Wararka - Maxay dad aad u tiro badani u doortaan albaabka bay'ada？
Albaabku ma aha oo keliya nooc ka mid ah qurxinta booska, laakiin sidoo kale waa ilaaliyaha goob kasta oo madax bannaan. Shaqooyinka quruxda badan, aamusan, aaminka ah iyo kuwa kaleba waa lama huraan, laakiin "waara" way fududahay in la iska indhatiro dadka isticmaala bilowga ah.
Sababtoo ah alaabada aan adkeynin isla markiiba ma soo bandhigi doonto dhibaatooyin badan ka dib rakibidda hore. Waxaa laga yaabaa in seddex ama shan sano ka dib, cillad, dildilaac iyo dhibaatooyin kale ay u muuqdaan isku xigxiga. Waqtigaan, isticmaaleyaal badan ayaa bilaabay inay ka qoomameeyaan cilmu-nafsiga dadweynaha, iyo qurxinta labaad, adkeysiga alaabooyinka ayaa noqon doona mudnaanta koowaad.
Guud ahaan marka la hadlayo, muddada nolosha qurxinta guryuhu waa qiyaastii 10 sano, nolosha guud ee adeegga albaabka bey'adeeduna waa in ka badan 20 sano, nolosha adeegga ee daboolidda albaabka bey'ada ayaa ah tan ugu sarreysa ama xitaa ka badan 50 sano. Sidaa darteed, ka hor qurxinta guud ee soo socota, ma jiri doonto xaalad sida "beddel lahayn, aad u adag in la rakibo".
Muxuu albaabka bey'adda u adkeysi badan yahay? Qaadashada albaabka deegaanka sare ee Mujiang tusaale ahaan, keel wuxuu qaataa jiilka shanaad titanium magnesium aluminium, oo dhumucdiisuna tahay 1.5mm. Iyo walxaha asalka ah ee aluminium ee leh awood sare, waa sheyga ugu fiican ee albaabka guriga ee casriga ah, kaas oo ah biyo-la'aan, qoyaan-celin la'aan, dildilaac anti, ka-hortagga-daxalka, ka-hortagga daxalka, saameynta ka-hortagga, isbeddel la'aanta iyo nolosha muddada dheer.
Intaa waxaa sii dheer, Albaabka deegaanka ee dhammaadka-dheer Mujiang wuxuu ku habboon yahay codsiga goobta oo buuxa ee guriga. Tusaale ahaan, albaabka jikada ee bey'ada qoyan badanaa waa meelaha laga mamnuucay alaabada albaabka alwaax. Si kastaba ha noqotee, astaamaha albaabka bey'ada ee biyuhu iyo uumiga-caddeynta ayaa xallin kara dhibaatadan oo aad ugu habboon bay'ada qoyaan badan ee qaraabada leh sida jikada iyo qolka nasashada.
Waxa intaa dheer in labada faa'iido ee cimri dherer iyo isticmaalka guud, albaab Mujiang alwaax leeyahay qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale:
Alwaaxa sare ee alwaaxda deegaanka ee Mujiang alwaax alwaax ah waxaa ka mid ah qoryo, maro, dhagax, midab adag iyo saameyn kale. Naqshadayntu waa mid ugub ah oo fudud, mood iyo deeqsi ah, taas oo sifiican u buuxin karta shuruudaha jiilka cusub ee macaamiisha 90-ka dambe ee muuqaalka sheyga.
Ka xoog badan
Marka la eego ilaalinta deegaanka, qalabka ugu muhiimsan ee Albaabka alwaax Mujiang waa titanium magnesium aluminium daawaha, antibacterial iyo dabka u adkaysta guddiga multilayer, anti antibacterial board, rinjiga deegaanka dabiiciga ah free-u-adkaysiga xirnaanta, lacag la'aan ah formaldehyde iyo biraha culus, iyo gaari heerka ilaalinta deegaanka ee E1.
Hadaad rabto oo kaliya inaad ogaato badeecada noocyadeeda ah, fadlan u imow albaabka deegaanka sare ee Mujiang isbarbar dhig. Waxaan rumeysanahay inaad dooran doontid albaabka deegaanka ee Mujiang dhammaadka-sare leh qaabab badan, adkeynaya iyo ilaalinta deegaanka oo aad u badan sida qoysas badan!